Daacish oo laba qoys u adeegsatay Weeraradii Ismiidaaminta ee ka dhacay Indonesia • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Daacish oo laba qoys u adeegsatay Weeraradii Ismiidaaminta ee ka dhacay Indonesia
Daacish oo laba qoys u adeegsatay Weeraradii Ismiidaaminta ee ka dhacay Indonesia
Kooxda xagjirka ah ee Daacish ayaa sheegtay qaraxyadii ay shalay fuliyeen labo qoys oo ka tirsanaa kooxdaasi.
Weeraradii Axadii iyo Isniintii shalay lagu qaaday Kaniisado iyo Xarun Booliis oo ku yaal magaalada Surabaya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Indonesia, ayey ku dhinteen ugu yaraan 25 qof.
Falkan ayey geysteen labo qoys oo la sheegay inay kamid ahaayeen kooxda Daacish, kuwaasi oo sanadkii 2017 dib uga soo noqday dalka Siiriya sida ay sheegeen ciidamada Booliiska.
Waalidiinta ayaa la sheegay inay sidoo kale ciyaalkood u adeegsadeen weeraradan ismiidaaminta ah, waxaana weerarkii shalay oo Isniin ah ka badbaaday gabar 8 jir ah oo kamid ahayd qoyska weerarka bambaano ku qaaday xarunta Booliiska oo ka koobnaa 5 ruux.
Qoyskan oo saarnaa labo mooto ayaa shalay isku qarxiyey irida laga galo xarunta booliiska, weerarkaasi oo ay sidoo kale ku dhinteen 4 qof oo rayid ah oo wadada marayey.
Weeraradii Axadii oo lala beegsaday 3 kaniisadood oo magaaladaasi ku yaal ayaa waxaa iyaguna geystay qoyska kale.
Aabaha qoyskaasi ayaa gaari bambaano la saaray ku qarxiyey kaniisad, halka hooyada iyo gabar yar oo ay dhashay isku qarxiyeen kaniisad labaad, labo wiil oo ay dhaleen ayaa iyaguna isku qarxiyey kaniisada sadexaad.
Saacado kadib weeraradaasi Axadii ayuu qarax weyn ka dhacay guri ku yaal meel 30km u jirta magaaladaasi, halkaasi oo lagu diyaarinayey bambaano, waxaana la sheegay inay ku dhinteen qaraxaasi sida khaldan u dhacay sadex qof oo kamid ah qoyskaasi sadexaad oo ay ku jirto hooyadii iyo cunug 17 sano jir ah, booliiska oo goobtaasi gaaray ayaa toogasho ku dilay aabaha reerkaasi oo la sheegay inuu sitay bambaano kale.